काठमाण्डौमा बसोबास गर्दै आइरहनुभएको छ भने आयो असाध्यै दुखको खबर |
काठमाण्डौमा बसोबास गर्दै आइरहनुभएको छ भने आयो असाध्यै दुखको खबर
August 5, 2021 August 5, 2021 adminLeaveaComment on काठमाण्डौमा बसोबास गर्दै आइरहनुभएको छ भने आयो असाध्यै दुखको खबर
डेढ साता यता काठमाडौं उपत्यकामा भाइरसको सङ्क्रमण ह्वात्तै बढेको छ। संक्रमण बढेसँगै अस्पताल भर्ना हुने बिरामीको संख्या पनि एक्कासि वृद्धि भएको छ। दोस्रो लहर आएसँगै लगाइएको निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा कडाई नहुँदा केही दिनयता दिनहुँ बिरामी बढेका हुन्।कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल), शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल, पाटन अस्पताल, शिक्षण अस्पताललगायत संस्थामा बिरामीको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ। दैनिक सङ्क्रमित बढेपछि कोभिड-१९ उपचारका लागि छुट्याइएका सघन उपचारकक्ष (आइसीयु), हाइडिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयु), भेन्टिलेटर र साधारण शय्या भरिएका छन्।सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालका डा. प्रवीण नेपालले अस्पतालका सबै शय्या भरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार १० दिन यतादेखि बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि शय्या भरिएका हुन्।
‘सङ्क्रमितहरु आउने क्रम बढेकाले हामीसँग भएका २०० शय्या भरिन्छन् होला’, उनले भने, ‘अहिले बिरामी पनि पहिलेका जस्तै श्वास फेर्न गाह्रो हुने, ज्वरो आउने समस्या रहेको छ।’उनका अनुसार आइसीयूमा २०, एचडीयूमा ५० र साधारण शय्यामा १३० जना बिरामी छन्। अहिले सङ्क्रमणको दोस्रो लहर चलिरहेको छ। दोस्रो लहर गत चैतबाट शुरु भएको हो। दोस्रो लहरसँगै बिरामी बढ्न थालेका हुन्। दोस्रो लहरमा सङ्क्रमितलाई ज्वरो आउने, निमोनिया हुने, श्वासप्रश्वासमा समस्या आउनेजस्ता समस्या देखिएको छ।सङ्क्रमणको दोस्रो लहर गत वैशाख अन्तिम सातामा उच्च विन्दुमा पुगेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निषेधाज्ञा खुला राखेर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू नगरेमा असोज १५ पछि सङ्क्रमणको तेस्रो लहर आउने चेतावनी दिएको छ।
भरिँदै अस्पताल:कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डा. जागेश्वर गौतमले विगत दुई हप्तादेखि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको बताए। उनले निषेधाज्ञा खुकुलो भएको, भीडभाड बढेको र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्दा बिरामी बढ्दै गएको बताए। उनका अनुसार अस्पतालमा १०० बिरामी रहेका छन्। तीमध्ये ३५ जना आइसीयू र चार जना भेन्टिलेटर र अन्य एचडीयूमा रहेका छन्। सङ्क्रमित बढ्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अस्पतालले एक हजार शय्या तयारी अवस्थामा राखेको उहाँको भनाइ छ। यहाँ एक सय आइसीयू र १०० भेन्टिलेटर रहेका छन्।
उनले सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अस्पतालमा २० टनको तरल अक्सिजन र दुईवटा अक्सिजन प्लान्ट जोडिएको जानकारी दिए। यस्तै थप एकवटा अक्सिजनको प्लान्ट जोड्ने तयारीमा अस्पताल छ। शुक्रराज अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बाँस्तोलाले निषेधाज्ञा खुलेसँगै बिरामी बढ्दै गएको बताए। उनका अनुसार अहिले २२ जना आइसीयू, २० भेन्टिलेटर र ३५ जना कोभिड-१९ शय्यामा रहेका छन्।
यस्तै पाटन अस्पतालका कोभिड-१९ सम्पर्क व्यक्ति डा आशिष श्रेष्ठका अनुसार कूल १५१ बिरामीमध्ये २१ आइसीयूमा र १० भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। यस्तै विगत २४ घण्टामा पाटन अस्पतालमा २२ सङ्क्रमित भर्ना भएका छन्। पाटनमा ३० आइसीयू, १५ भेन्टिलेटर शय्या छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा आठ हजार ८९५ सक्रिय सङ्क्रमित छन्। देशभरि १५७ अस्पताल कोभिड-१९ का लागि सूचीकृत गरिएका छन्। ती अस्पतालमा दुई हजार ६०० आइसीयू रहेका र ६३० थप गर्ने प्रक्रियामा छन्।
यस्तै ९०० भेन्टिलेटर र दुई हजार ७५ एचडीयू रहेका छन्। उपत्यकाका सरकारी अस्पतालमा ३११ आइसीयू र १३९ भेन्टिलेटर र साधारणसँगै एचडीयू दुई हजार ६६ शय्या रहेका छन्। देशभरिमा ६९० जना आइसीयु र १७५ भेन्टिलेटर, तीन हजार २२४ जना संस्थागत आइसोलेशन र २८ हजार ४०५ जना होम आइसोलेशनमा रहेका छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारीले शय्या भरिन थालेको बताए।
सोच्दै नसोचेको घटना,आफ्नै छोरालाई जिउदै गाडे राजु परियारले।
बाबुको काखमा बसेकी छोरीलाई चितुवाले खोसेर लग्यो,चिच्याउँदै चितुवाको पछि गए त्यसपछी..
Breaking:प्रधानमन्त्री ओलिद्वारा प्रचण्डको गम्भीर बदमासीको खुलसा,पुरा हेर्नुहोस्,यस्ता थिए भित्री रहस्य
शहर त खतरामा थियो नै,अब गाउँ गाउँमा पस्न थाले कोरोना।यी गाउँहरू उच्च जोखिममा।
नसोच्ने दरमा ह्वात्तै बढ्यो तरकारीको मूल्य।यतिसम्म महँगो अहिलेसम्म भएको थिएन।मुल्य थाहा पउदा चकित